ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်၏ bulk China Manufacturer
Adjuvant မှစ. gelatin ၏ဖယ်ရှားရေး,ဘိုင်အိုဆေးဝါး Bioproducts ဆေးပညာ,အဆိုပါကာကွယ်ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Asia ထုတ်ကုန်: 1% - 10% Cert: GMP ဖေါ်ပြချက်: Adjuvant မှစ. gelatin ၏ဖယ်ရှားရေး,ဘိုင်အိုဆေးဝါး Bioproducts ဆေးပညာ,အဆိုပါကာကွယ်ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး (တိုက်ရိုက်) > ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက် > ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်၏ bulk
 ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်၏ bulk
2008 ခုနှစ်တွင် BCHT အောင်မြင်စွာရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတရုတ်နိုင်ငံ, Live ယင်း၏ထုတ်ကုန်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အောက်ပါနှစ်များတွင် BCHT စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကျူးလွန်ခြင်းနှင့် adjuvant ထံမှ gelatin ၏ 2010 ဖယ်ရှားရေးအတွက်ဦးဆောင်နှင့်ဒါတွေကတိုးတက်မှုကာကွယ်ဆေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးမြှင့် 2011 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ထားတဲ့ 36 လကြာမှကာကွယ်ဆေးကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝတက်တိုးချဲ့နှင့် အရည်အသွေး, နှင့် BCHT ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအတွက်ဦးဆောင်အနေအထားတည်ထောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီ attenuation တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေး (LAIV) အသက်ရှင်နေထိုင်အပါအဝင် 13 key ကိုကာကွယ်ဆေးစီမံကိန်းများ, လူ့အသုံးပြုရန်သစ်ကိုခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းစျေးကွက်မှဖြန့်ချိလိမ့်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်း acellular DTP ကာကွယ်ဆေးရှိပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Adjuvant မှစ. gelatin ၏ဖယ်ရှားရေး , ဘိုင်အိုဆေးဝါး Bioproducts ဆေးပညာ , အဆိုပါကာကွယ်ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန် , Bioproducts ဆေးဝါးအသက်ရှင်နေထိုင် , ကြိုတင်ကာကွယ်မှု gelatin အခမဲ့ကနျြးမာရေး , ရေကျောက် gelatin အခမဲ့တိုက်ရိုက် , Bioproducts အမြင့်အာနိသင်ဆေးပညာ , gelatin အခမဲ့အမြင့် Titer ကနျြးမာရေး